UkusukaLinux ku-PPT (Iphrojekthi Yokwenyusa Itekhnoloji) | Kusuka kuLinux
Kulungile uma ngithi KusukaLinux Ngisho kuleli cala KZKG ^ Gaara nami, kodwa into ebalulekile ukuthi besikhona futhi sabatshela ukuthi konke kuhamba.
I-PPT (Iphrojekthi Yokukhuthaza Ubuchwepheshe) iphrojekthi equkethe uchungechunge lwemicimbi ehlelwe yi-University of Computer Sciences yaseCuba (UCI), lapho inhloso ukukhuthaza nokwabelana ngezicelo (ezinye azikhululekile), ulwazi, njll.
Abafana abavela abantu (UCI Free Software Community) futhi-ke, amalungu we- Umphakathi weFirefox eCuba, esabelana naye isikhashana futhi sishintshana ngezicelo zeFirefoxOS.
Kwakunabavakashi abavela kwamanye amazwe afana ne-Italy abathanda I-Firefox OS, abafundi abavela kwamanye amanyuvesi, abaphothule iziqu ze-UCI abasebenza eduze, kanye nomphakathi jikelele, abebenentshisekelo enkulu kwimikhiqizo yeMozilla.
Lesi sinyathelo sithakazelisa kakhulu ngoba noma yiluphi uhlobo lomuntu, kungakhathalekile ukuthi unjani, angasondela futhi afunde kabanzi ngalo Isofthiwe yamahhala, I-Mozilla, I-Firefox OS Futhi njengoba ubona ezithombeni, usuvele ubona amanye amafoni atholakalayo.
Izithombe ezengeziwe zomcimbi kokuthunyelwe kwe- IFirefoxmania.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Kusuka kuLinux ku-PPT (Iphrojekthi Yokwenyusa Itekhnoloji)
Impela ukuvakasha bekuthakazelisa kakhulu futhi kukhulunywa kakhulu namalungu omphakathi waseMozilla waseCuba.Sibe nenhlanhla yokwabelana ngolwazi kanye nokuhlangenwe nakho nabanye babo abanjengoYunier noma u-Erick eLima, engimbona no-Elav esithombeni.
Yebo, simazi u-Erick kanye nabanye iminyaka embalwa, empeleni izikhathi ngaphambi kokuthatha leso sithombe ngiyakhumbula ukuthi besikhuluma ngawe 😀
Yebo, kuyiqiniso .. 😀
Kuyathakazelisa ... Ngokusobala, labo baseMozilla Peru baxhumana ngokoqobo nayo yonke imiphakathi yaseMozilla.
Kuyihlazo ukungabi nemali eyanele yokuwavakashela futhi ukwazi ukuxoxa nawo (kanti futhi, bheka ukuthi i-intanethi isebenza kanjani ngempela eCuba).
Kubukeka kukuhle kimi ukuthi lezi zinhlobo zemicimbi ziyabanjwa. Ngibe nethuba lokuhambela ingqungquthela yesoftware yamahhala neFLISOL, futhi kunezinto ezithokozisayo.
Ungasitshela ukuthi ngubani phakathi kwenu? Ngicabanga ukuthi ophethe isikhwama se-fuchsia ngu-Elav nalowo oseduze kwesikibha esiluhlaza okwesibhakabhaka i-KZKG ^ Gaara.
Hhayi-ke, angazi ukuthi umbala we-fuchsia unjani kodwa ... lowo onesikhwama esibomvana / esibomvu yebo, yi-elav, futhi kunjalo, yimi ophethe i-blue pullover 🙂 ... manje njengoba usubukeka kuyo, akusona esinye sezithombe zami ezinhle kakhulu HAHA
Ukuvuselela izithombe esigabeni esithi "Singobani", kwathiwa.
Manje, amahlaya eceleni, bengizobathanda ukuthi balayishe amavidiyo alo mcimbi ngesifufula (ukuqonda ukuthi ukusatshalaliswa komkhawulokudonsa kukungalingani kanjani ezweni likaCelia Cruz), futhi ngenxa yalokho ngikwazi ukukulayisha kuVimeo.
Ngemuva kwakho konke, ukubuyekezwa kwe-Iceweasel bekufike izolo, obekulungiswa iziphazamisi lapho nje ngifunda le ndatshana.
Sawubona. Nayi impendulo: https://es.wikipedia.org/wiki/Fucsia
Uqagele kahle !! 😀
Che, umlenze we-DL wase-Argentina awukho! 🙂
Hhayi, kubi… siyakuhalalisela! Bajabule kakhulu ngeFirefoxOS yabo.
Ngokulandelayo siyakumema (kufakwe ithikithi lendiza) i-XDDD
Sethemba ukuthi eCuba, amadokodo e-inthanethi awabeki leyo nguqulo yeFirefox eza ngaphandle kokukhetha sibongile (iphupho elibi lawo wonke ama-taringuero).
Cacisa umbuzo kimi ... ngiyaqonda ukuthi usuvele unayo ukufinyelela kwe-inthanethi kwamahhala esiqhingini kodwa
Ingabe ukufinyelela ekhaya kuvunyelwe noma kufanele baye endaweni yomphakathi? zikhona yini izindawo ezidonsela kuzo ukuxhuma nge-wifi? Futhi ekugcineni ukufinyelela kukhululekile ngempela noma kuhlungiwe ???